Yimuphi amamitha angcono kune-satellite plus noma i-expression > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
I-glucometer iyithuluzi lokuqapha elizimele lasekhaya lamazinga kashukela egazini. Ngohlobo 1 noma isifo sikashukela sohlobo 2, kufanele uthenge i-glucometer futhi ufunde ukuyisebenzisa. Ukwehlisa ushukela wegazi ube yinto ejwayelekile, kufanele kukalwe kaningi kakhulu, kwesinye isikhathi izikhathi ezi-5-6 ngosuku. Ukube bebengekho abahlaziyi abaphethe ekhaya, khona-ke bekuzodingeka ngilale esibhedlela.
Namuhla, ungathenga imitha yeglucose elula futhi enembile. Sebenzisa ekhaya nalapho uhamba. Manje iziguli zingalinganisa kalula ushukela wegazi ngaphandle kobuhlungu, bese, kuye ngemiphumela, "zichaze" ukudla kwazo, ukusebenza komzimba, umthamo we-insulin nezidakamizwa. Lokhu kunguquko yangempela ekwelapheni isifo sikashukela.
Esihlokweni sanamuhla, sizoxoxa ngokuthi ungayikhetha futhi uyithenge kanjani i-glucometer efanele wena, engabizi kakhulu. Ungaqhathanisa amamodeli akhona ezitolo eziku-inthanethi, bese uthenge ekhemisi noma i-oda ngokulethwa. Uzofunda okufanele ubheke lapho ukhetha i-glucometer, nokuthi ungakuhlola ukunemba kwayo ngaphambi kokuthenga.
Ungayikhetha kanjani nokuthi ungayithenga kuphi i-glucometer
Ungayithenga kanjani i-glucometer enhle - izimpawu ezintathu eziyinhloko:
kumele akhombise umphumela ngqo,
kumele alinganise ngokunembile ushukela wegazi.
I-glucometer kumele ilinganise ushukela wegazi ngokunembile - lokhu kuyisidingo esiyisisekelo futhi esidingekayo ngempela. Uma usebenzisa i-glucometer "eqamba amanga", khona-ke ukwelashwa kwesifo sikashukela i-100% kuzobe kungaphumeleli, naphezu kwayo yonke imizamo nezindleko. Futhi kuzofanela 'ujwayelane' nohlu olunothile lwezinkinga ezinzima zesifo sikashukela. Futhi ngeke ufise lokhu esitheni esibi kakhulu. Ngakho-ke, yenza yonke imizamo yokuthenga ucingo olunembile.
Ngezansi kwalesi sihloko sizokutshela ukuthi ungayihlola kanjani imitha ukunemba. Ngaphambi kokuthenga, ngaphezu kwalokho thola ukuthi imichilo yokuhlola ibiza malini nokuthi hlobo luni lwewaranti umakhi alunikeza ngempahla yabo. Ngokufanelekile, iwaranti kufanele ibe nomkhawulo.
Imisebenzi eyengeziwe ye-glucometer:
inkumbulo eyakhelwe ngaphakathi yemiphumela yezilinganiso ezedlule,
isexwayiso esizwakalayo mayelana ne-hypoglycemia noma amanani kashukela wegazi angaphezu kwemikhawulo ephezulu yesilinganiso,
amandla okuxhumana nekhompyutha ukudlulisa idatha kusuka kwimemori kuyo,
i-glucometer ehlanganiswe ne-tonometer,
Amadivayisi we- "Talking" - kubantu abangaboni kahle (i-SensoCard Plus, iCleverCheck TD-4227A),
Idivaysi engalinganisa ushukela wegazi hhayi kuphela, kodwa ne-cholesterol ne-triglycerides (AccuTrend Plus, CardioCheck).
Yonke imisebenzi engezansi ebalwe ngenhla inyusa intengo yabo, kepha ayisetshenziswa kakhulu ekuzenzeni. Sincoma ukuthi uhlole ngokucophelela "izinkomba ezintathu eziyinhloko" ngaphambi kokuthenga imitha, bese ukhetha imodeli okusebenziseka kalula futhi engabizi enezici ezimbalwa ezingeziwe.
Yikuphi ukudla okufanele ukwenze? Ukuqhathaniswa kokudla okuphansi kwekhalori nokudla okuphansi kwe-carbohydrate
Thayipha umuthi wesi-2 wesifo sikashukela: i-athikili enemininingwane
Ungayihlola kanjani imitha ukunemba
Ngokufanelekile, umthengisi kufanele akunikeze ithuba lokuhlola ukunemba kwemitha ngaphambi kokuyithenga. Ukuze wenze lokhu, udinga ukukala ushukela wakho wegazi izikhathi ezintathu zilandelana nge-glucometer. Imiphumela yalezi zilinganiso kufanele ihluke komunye nomunye ngokungadluli i-5-10%.
Ungathola futhi isivivinyo sikashukela wegazi elabhorethri bese uhlola imitha yakho kashukela egazini ngasikhathi sinye. Thatha isikhathi sokuya lab futhi ukwenze! Thola ukuthi yiziphi izindinganiso zikashukela wegazi. Uma ukuhlaziywa kwelebhu kukhombisa izinga le-glucose egazini lakho lingaphansi kuka-4.2 mmol / L, khona-ke iphutha elivumelekile le-analyzer ephathekayo alikho ngaphezu kwe-0.8 mmol / L endaweni eyodwa noma kwenye. Uma ushukela wakho wegazi ungaphezulu kwe-4.2 mmol / L, khona-ke ukuphambuka okuvumelekile ku-glucometer kukhuphuke kube ngu-20%.
Kubalulekile! Ungathola kanjani ukuthi imitha yakho inembile:
Linganisa ushukela wegazi nge-glucometer kathathu ilandelana ngokushesha. Imiphumela kufanele ihluke ngokungabi ngaphezu kuka-5- 10%
Thola ukuhlolwa kweshukela egazini. Futhi ngasikhathi sinye, ukukala ushukela wegazi lakho nge-glucometer. Imiphumela kufanele ihluke ngokungabi ngaphezu kwama-20%. Lokhu kuhlolwa kungenziwa esiswini esingenalutho noma ngemuva kokudla.
Yenza ukuhlolwa kokubili njengoba kuchaziwe esigabeni 1. kanye nokuhlolwa usebenzisa ukuhlolwa kwegazi kwelebhu. Ungazihlanganisi entweni eyodwa. Sebenzisa i-analyzer ushukela wekhaya onembile kubaluleke kakhulu! Ngaphandle kwalokho, konke ukungenelela kokunakekelwa kwesifo sikashukela kuzobe kungasasebenzi, futhi kuyofanele 'wazi kahle' izinkinga zako.
Inkumbulo eyakhelwe ngaphakathi yemiphumela yokulinganisa
Cishe wonke ama-glucometer anamuhla anenkumbulo eyakhelwe ngaphakathi yezilinganiso eziyikhulu. Idivayisi "ikhumbula" umphumela wokulinganisa ushukela wegazi, kanye nosuku nesikhathi. Ngemuva kwalokho le datha ingadluliselwa kwikhompyutha, ibalwe amanani ayo aphakathi nendawo, ukubuka izitayela, njll.
Kepha uma ngempela ufuna ukwehlisa ushukela wegazi lakho futhi uligcine liseduze nokujwayelekile, lapho-ke imemori eyakhelwe ngaphakathi yemitha ayinamsebenzi. Ngoba akabhalisi izimo ezihlobene:
Ngabe udle nini futhi nini? Ngabe udle amagremu amangaki ama-carbohydrate noma amayunithi wesinkwa?
Kwakuyini ukusebenza komzimba?
Yimuphi umthamo wamaphilisi we-insulin noma wesifo sikashukela owatholakala futhi wawunini?
Wake wabhekana nengcindezi enkulu? Umkhuhlane ojwayelekile noma esinye isifo esithathelwanayo?
Ukubuyisa ushukela wegazi lakho ngokwejwayelekile, kuzodingeka ugcine idayari lapho ubhala khona ngokucophelela wonke la ma-nuances, uwahlaziye bese ubala ama-coefficients akho. Isibonelo, "i-gram eyi-1 ye-carbohydrate, edliwe ekudleni kwasemini, iphakamisa ushukela wami nge-mmol / l."
Imemori yemiphumela yokulinganisa, eyakhelwe kumamitha, ayenzi ukuba kube lula ukuqopha lonke ulwazi olufanele oluhlobene. Udinga ukugcina idayari ebhukwini lephepha noma kwifoni yesimanje yeselula (i-smartphone). Sebenzisa i-smartphone yalokhu kulula kakhulu, ngoba uhlala unawe.
Sincoma ukuthi uthenge futhi usebenzise i-smartphone kakade uma ungagcina “idayari yakho yesifo sikashukela” kuyo. Kulokhu, ifoni yanamuhla yamadola ayi-140-200 ifanelekile impela, akudingekile ukuthenga eqolo. Ngokuqondene ne-glucometer, bese ukhetha imodeli elula futhi engabizi, ngemuva kokubheka “izimpawu ezintathu eziphambili”.
Imichilo yokuhlola: intwana yezindleko
Ukuthenga imichilo yokuhlola ukukala ushukela wegazi - lokhu kuzoba yizindleko zakho eziphambili. Izindleko “zokuqala” ze-glucometer ziyisibalo uma kuqhathaniswa nenani eliqinile okufanele uzibekele imichilo yokuhlola njalo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthenga insiza, qhathanisa izintengo zemichilo yokuhlola yona namanye amamodeli.
Ngasikhathi sinye, imichilo yokuhlola eshibhile akufanele ikunxenxe ukuthi uthenge i-glucometer embi, ngokunemba kwesilinganiso esiphansi. Ukala ushukela wegazi hhayi "ngombukiso", kepha impilo yakho, ukuvikela izinkinga zesifo sikashukela nokwelula impilo yakho. Akekho ozokukulawula. Ngoba ngaphandle kwakho, akekho umuntu odinga lokhu.
Kwamanye ama-glucometer, imichilo yokuhlola iyathengiswa ngamaphakeji ngamanye, nakwabanye ekupakweni “okuhlangeneyo”, isibonelo, izingcezu ezingama-25. Ngakho-ke, ukuthenga imichilo yokuhlola kumaphakeji ngamanye akulungile, yize kubonakala kulula kakhulu. .
Lapho uvula ukufaka okuhlanganisiwe okuhlanganisiwe ngemigqa yokuhlola - udinga ukukusebenzisa masinyane sonke isikhathi. Ngaphandle kwalokho, imichilo yokuhlola engasetshenziswa ngesikhathi izokonakala. Kukwenza ngokwengqondo ukukala ushukela wakho wegazi njalo. Futhi lapho wenza kaningi lokhu, uzokwazi ukulawula ushukela wakho.
Izindleko zemichilo yokuvivinya ziyanda, kunjalo. Kepha uzokonga kaningi ekwelashweni kwezinkinga zikashukela ongeke ube nazo. Ukuchitha u- $ 50-70 ngenyanga kuma-strips wokuhlola akujabulisi kakhulu. Kepha leli inani elingajwayelekile uma liqhathaniswa nomonakalo ongadala ukungaboni kahle, izinkinga zomlenze, noma ukuhluleka kwezinso.
Iziphetho Ukuthenga ngempumelelo i-glucometer, qhathanisa amamodeli ezitolo eziku-inthanethi, bese uya ekhemisi noma i-oda ngokulethwa. Ngokunokwenzeka, idivaysi elula engabizi ngaphandle kwezinsimbi nezikhonkwane ezingadingekile izokufanela. Kufanele ingeniswe komunye wabakhiqizi abadumile emhlabeni. Kungcono ukuthi uxoxisane nomthengisi ukuze uhlole ukunemba kwemitha ngaphambi kokuthenga. Futhi unake intengo yemivimbo yokuvivinya.
I-OneTouch Khetha Uhlolo - Imiphumela
NgoDisemba ka-2013, umbhali wale ndawo uDiabetes-Med.Com wahlola imitha ye-OneTouch Select esebenzisa indlela echazwe ngenhla.
Ekuqaleni ngithathe izilinganiso ezi-4 ngokulandelana ngokuphumula kwemizuzu engama-2-3, ekuseni ngesisu esingenalutho. Igazi lalikhishwa kwiminwe ehlukene yesandla sobunxele. Imiphumela oyibona esithombeni:
Ekuqaleni kukaJanuwari 2014 waphumelela izivivinyo elabhoratri, kufaka phakathi ushukela we-plasma glucose. Imizuzu emi-3 ngaphambi kokuthatha isampula legazi kusuka emthanjeni, ushukela walinganiswa ne-glucometer, wabe esewuqhathanisa nomphumela welebhu.
IGlucometer ikhombisile mmol / l
Ukuhlaziywa kwelebhu "Glucose (serum)", mmol / l
Isiphetho: Imitha ye-OneTouch Select inembe kakhulu, inganconywa ukusetshenziswa. Umbono ojwayelekile wokusebenzisa le mitha muhle. Ithonsi legazi liyadingeka kancane. Isembozo sikhululekile kakhulu. Intengo yemichilo yokuhlola yamukelekile.
Thola isici esilandelayo se-OneTouch Select. Musa ukuphonsa igazi emgqeni wokuhlola kusuka phezulu! Ngaphandle kwalokho, imitha izobhala "Iphutha 5: alikho igazi elanele," umucu wokuhlola uzokonakala. Kuyadingeka ukuletha ngokucophelela idivaysi "ekhokhisiwe" ukuze umucu wokuhlola utshe igazi ngethiphu. Lokhu kwenziwa njengoba kubhaliwe futhi kukhonjisiwe emiyalweni. Ekuqaleni ngachitha imivimbo engu-6 yokuhlola ngaphambi kokuthi ngiyijwayele. Kepha lapho-ke isilinganiso soshukela wegazi njalo senziwa ngokushesha futhi ngokufanele.
P. S. Abenzi abathandekayo! Uma unginikeza amasampula wama-glucometer akho, ngizobahlola ngendlela efanayo futhi ngibachaze lapha. Ngeke ngithathe imali yalokhu. Ungangithinta ngesixhumanisi esithi "Mayelana noMlobi" ku- "engaphansi" yaleli khasi.
Imitha yami kashukela egazini oyithandayo. Qhathanisa nabalingani bakho ababizayo.
Manje yisho ukuthi nginobuqili.
Kwesinye isikhathi kubukeka sengathi okungabizi kakhulu kungcono.
Kepha kukhona okuhlukile.
Nginesifo sikashukela ku-insulin enokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwe-10, futhi ngisasebenzisa i-satellite ne-satellite plus glucometer, kanye nabafowethu abangenisiwe, abasheshayo. Ngani? Unezinzuzo eziningi.
Okokuqala, le mizuzwana emi-5 engenisa ama-glucometer flaunt adliwe yiqiniso lokuthi ukuvula imbiza, ukukhipha imichilo emincane lapho, ukuvala imbiza kungithatha ngasikhathi sinye, noma ngisho nangokwengeziwe, ukwedlula uma ngithathe umucu kumuntu isiphuphutheki satellite. Lapho, ucezu lwephepha ludwengulwa umzuzwana, kodwa akufanele unqume kule jar.
Ithonsi legazi le- "Satellite Plus" liyadingeka lincane kakhulu kune- "Satellite", selivele lijabulisa. Kepha hhayi microscopic. Ukudonsa phezulu. Ngakho-ke "i-hemisphere" enjalo ilele phansi.
Imizuzwana engama-20 - lokhu akukude - ngalesi sikhathi engikwaziyo ukusikhulula, ngisule isandla sami. Kungani u-5? Akunasidingo.
Enye inzuzo engathandabuzeki ukuthi imichilo inamaphakethe ngamunye, futhi uma uqala ukusebenzisa ibhokisi, ungawelula impilo yonke eshalofini, futhi emabhange ama-analogues angenisiwe kufanele "uqede" lokhu ngenyanga ngenyanga, kuzokoma. Futhi uma ungalinganisi kaningi, khona-ke bazokoma ngokungenakuvinjwa. Kusizi, akunjalo?
Into ebingathandabuzeki ukuthi iSatellite Plus, uma uyiqhathanisa nomfowethu omdala, iSatellite, akusafanele ifakwe ngesandla, faka nje ikhodi ekhethekile, izokwenza umsindo oncomekayo - ikhodi ngokwayo izofakwa - futhi ungayisebenzisa.
Ngizama ukungalahli kuphela umucu wekhodi kuphela. Ngokungazelele, ngokwesibonelo, ibhethri lizophela. Ngendlela, ibhethri ibamba isikhathi eside kakhulu. Unesikhathi sokukhohlwa lapho kusethiwe.
Futhi impikiswano enamandla kulabo abalinganisa kaningi. Imichilo ibiza ama-ruble ayi-7-8, i.e. izindleko zebhokisi zisuka ku-350 p. futhi ngaphezulu (ngokuya kukhemisi), kungcono ukuthatha ezikhungweni ezikhethekile, isibonelo, isibhedlela noma umtholampilo. Qhathanisa nabalingani bakwamanye amazwe, lapho ibhokisi lemivimbo engu-50 lizokulinganela cishe yi-1000 p.
Isembozo se-rag asibonakali sihlanzeke kakhulu. Kepha cha! Kusulwa buthule emshinini wokuwasha.
Izinzuzo zidlula, ngakho-ke ngisazisebenzisa. Umphumela ukhombisa kahle (kuqinisekiswe kaningi!)
Umenzi unikeza amamodeli wesimanje e-satellite asebenza ngokwendlela ye-electrochemical. Imichilo yokuhlola yenziwa ngokuya ngomgomo okhethekile we- "chemistry owomile", kepha ngasikhathi sinye ukulinganiselwa kwamadivayisi kwenziwa ngegazi eliyinqaba. I-satellite inikezwa yi-ELTA, futhi izinsimbi zifuna ukwethulwa kwencwadi yekhodi yokuvula umucu. Ukutholwa ngokufanele, ukunakekelwa okukhethekile kumele kuthathwe, ngoba inhlanganisela yekhodi kufanele ikhonjiswe kahle.
Inkampani yaseRussia i-ELTA inikeza amamodeli amathathu wemitha:
I-Satellite ELTA (uhlobo lwakudala),
Imitha yeSatellite Plus,
I-Glucometer Satellite Express.
Imodeli ngayinye inamapharamitha athile wezobuchwepheshe, ngakho-ke unganquma ukuthi kulula kangakanani kokuxilongwa kwekhaya okuzayo nokuthembeka komphumela. Imiyalo yencwajana yemitha yesatellite ibonisa imithetho eyisisekelo evamile kuwo wonke amamodeli amathathu. Ngalesi sizathu, umgomo wokusebenza nokusetshenziswa uyefana, kepha amapharamitha wezobuchwepheshe ahlukile.
Amamitha weshukela wegazi wanamuhla ahlaziya okukhona okubuthakathaka okwenzeka phakathi kwento ukusuka emgqeni wokuhlola kanye noshukela oqukethwe egazini elisetshenzisiwe. Isiguquli se-analog-kuya kwidijithali sinquma ukufundwa ngqo, bese sibanikeza ekubonisweni kwensiza. Lokhu kunquma izici zokusebenzisa izinto zanamuhla. Ngokuxilongwa ngokucophelela kwasekhaya, kungenzeka ukuvikela ithonya elingathandeki lezinto zemvelo, ngenxa yalokho ukuhlaziya kuzohluka kudatha efanele futhi kukuvumela ukuthi uqaphe kahle impilo yakho. Amadivaysi e-Electronics mitambo aqashelwa njengosebenzayo, asezingeni eliphakeme futhi anembile.
Ukuhlolwa kwasekhaya, ukusetshenziswa kwegazi lonke kuyphoqelelwa. Umshini wanamuhla awukwazi ukukala izinga le-glucose ku-vein ne-serum, ngakho-ke kusetshenziswa igazi elisha kuphela. Uma umuntu esebenzisa igazi elitholwe ngaphambi kwesikhathi, imiphumela izoba engalungile.
I-Glucometer Satellite Express
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuthatha i-ascorbic acid ngaphezulu kwegramu eyi-1 kuzonyusa izinkomba, ngakho-ke isimo seqiniso sempilo naso singanqunywa. Kulokhu, umphumela ongaba khona we-ascorbic acid, owesikhashana, kufanele ubhekwe.
Isifundo sasekhaya sisebenzisa i-glucometer sinqatshelwe kulezi zimo ezilandelayo:
ukuvuvukala, kungakhathalekile ukuthi ibonakala kangakanani,
Kwezinye izimo, ukulawulwa kwasekhaya kweglucose yegazi kungenzeka, kodwa ngemithetho eyisisekelo yokusebenzisa ucingo.
Ekuqaleni, abathengi abangahle baqhathanisa idatha yezobuchwepheshe yamamodeli amathathu amamitha weSatellite, emva kwalokho batadisha ngokucophelela izici ezijwayelekile zemikhiqizo.
Ibanga lokulinganisa.Izinkomba ze-Express and Plus show from 0.6 to 35, ELTA Satellite - kusuka ku-1.8 kuya ku-35.
Umthamo wegazi. Ngokuxilonga okuzwakalayo, i-1 μl yegazi iyadingeka. Kwezinye izimo, umthamo wegazi odingekayo ngu-4-5 μl.
Isikhathi sokulinganisa Ukuxilongwa kwe-inthanethi kuthatha imizuzwana eyi-7. Ukuguqulwa okuningi kukuvumela ukuthi uthole umphumela oqondile ngemuva kwemizuzwana engama-20, CRT - ngemuva kuka-40.
Inani lememori. Ku-Plus naku-Express, kuze kube yimiphumela engama-60 egcinwe. I-ELTA Express igcina ukufundwa okungama-40 kuphela.
Umthengi ngamunye ongahle azinqume ngokuzimela ngamathuba alandelayo wokusebenzisa i-glucometer, ukugxila kwizidingo zomuntu, ecabanga ngesimo sempilo kanye nesimo sesifo sikashukela.
Izinkomba zezobuchwepheshe ezijwayelekile ezinquma ukuthi kungenzeka ukusetshenziswa ngempumelelo kwensiza:
isilinganiso se-glucose sisuselwa kwindlela ye-electrochemical,
ibhethri elilodwa lihlala isilinganiso esingu-5,000,
izinga lokushisa eliphansi kakhulu lingama-degrees ayi-10, ubukhulu buhlanganisa nama-30,
ukulinganisa kungenziwa emazingeni okushisa kusuka ku-15 kuya ku-35 degrees, futhi umswakama womoya akufanele udlule kuma-35%.
IGlucometer Satellite Plus igcina imiphumela engu-60
Uma imitha kufanele igcinwe okwesikhashana emazingeni aphansi okushisa, insiza kufanele igcinwe endaweni efudumele imizuzu eyi-30 ngaphambi kokusebenzisa esikhathini esizayo. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukugcina ucingo luseduze nemishini yokushisa, ngoba ithinta kabi imishini futhi ilungisa isimo sayo. Labo abasebenzisa imitha kashukela ushukela ngokuvamile bayayazi indlela yokuqhuba kahle ukuxilongwa kwasekhaya ukuqapha ushukela wegazi labo. Ngokuhlolwa okulungile, imininingwane izosondela kakhulu emiphumeleni yokuhlolwa kwelebhu.
Imodeli ngayinye inikezwa ngephakeji elithile elivunyelwe ngumenzi:
Izingcezu ezingama-25 ze-lancet kanye nemichilo yokuhlola (nokho, imichilo yokuhlola eyi-10 kuphela enikezwa ku-ELTA Satellite),
amabhethri ayisisekelo nawesibili
idivaysi ekhethekile yokubamba okuncane kwesikhumba,
imibhalo: imanyuwali kanye newaranti khadi.
Imitha yesethelayithi isethiwe ephelele
Esikhathini esizayo, uzodinga ukuthenga njalo ama-lancets kanye nemichilo yokuhlola, ngoba ngaphandle kokusebenzisa kwabo kuzoba nzima ukwenza ukuhlolwa kwasekhaya.
Amadivayisi we-satellite anembe kakhulu, ngoba iphutha cishe lingama-20% (imiphumela inqunywa izinga le-glucose esegazini lika-4,2 kuya ku-35 mmol). Le phutha lincane kunelamanye amamodeli amaningi.
Ngasikhathi sinye, izinzuzo ezibalulekile zamadivayisi wanamuhla anquma izizathu zokuthandwa kwamadivayisi ahlongozwayo angabalwa:
ukuhlinzeka isiqinisekiso sedivayisi ngayinye ethengiwe kukuvumela ukuthi ubheke ukuthi kungenzeka kokuthenga okuzayo,
intengo engabizi yamadivayisi nezinto ezihlinzekiwe ,omphumela wokuthi wonke umuntu onesifo sikashukela angakwazi ukuthenga i-satellite,
ukusetshenziswa kalula nokuhlolwa kwasekhaya ngemiphumela ethembekile,
isikhathi sokulinganisa esifanele (hhayi imizuzwana engama-40),
osayizi abakhulu besikrini, ukuze uzibonele imiphumela,
Kufika ezinkulungwaneni eziyizinkulungwane ezi-5 zanele ibhethri elilodwa (ukufaka esikhundleni akuvamile).
Izinzuzo ezinjalo ziyophawulwa uma imithetho yesitoreji sedivayisi ilandelwa.
Kodwa-ke, ukungathandeki kwamadivaysi ahlongozwayo nawo angabalwa:
inani elincane lememori
ubukhulu bensiza, ngenxa yalokho ukusetshenziswa kungahle kungabi lula kakhulu,
ukuntuleka kokuxhuma kwikhompyutha.
Izici Nemigomo Yokusebenzisa
Ngaphambi kokusebenza kokuqala kwemitha yeSatellite, kubalulekile ukutadisha ngokucophelela imiyalo yokusetshenziswa kwensiza futhi uqiniseke ukuthi idivaysi isebenza kahle. Imicu yokulawula ifakwe kwisokhethi off imishini. Isithonjana se-emoticon ehlekisayo kufanele sivele kwisibonisi futhi umphumela kufanele uboniswe kusuka ku-4.2 kuya ku-4.6, ngoba lokhu kubonisa ukusebenza kahle kwensiza. Ngemuva kwalokho, umugqa wokulawula uyasuswa bese kuqalwa ukuhlolwa kwasekhaya.
Ekuqaleni kokuxilongwa, umucu wokuhlolwa kwekhodi uphinde uphinde ufakwe kusokhethi lemitha.
Isibonisi sizobonisa iphethini lekhodi elihambisana nenombolo yochungechunge esetshenzisiwe.
Imicu yekhodi isusiwe ku-slot.
Geza izandla kahle ngensipho bese usula owomile.
I-lancet ibekwe endaweni ekhethekile yepenti-isikhafu.
Imicu yokuhlola ifakwe kudivayisi. Oxhumana nabo kufanele baqondiswe. Ikhodi kumele ilungile, ngoba ukuthembeka kwemiphumela kuncike kulokhu.
Udinga ukulinda umzuzu lapho kuzovela khona isithombe sokwehla kwegazi esikrinini bese siqala ukuqhuma. Bhoboza umunwe ngobunono. Igazi lisetshenziselwa emaphethelweni emicu yokuhlola esetshenzisiwe.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, umphumela uzobonakala esikrinini.
Imiyalo yokusebenzisa i-satellite glucometer ilula, ngakho-ke ungaqhuba ngempumelelo ukuxilongwa kwasekhaya okulandelayo futhi uthole umphumela oqondile.
Imivimbo yokuhlola nezibambo
I-ELTA iqinisekisa ukuthi kulula ukuthengwa kwezinto ngenani elingabizi. Imichilo nemivimbo yokuthengisa iyathengiswa emakhemisi aseRussia. Imivimbo ngayinye yokuvivinya empeleni isephaketheni ngalinye.
Ukukhetha umucu wokuvivinya amamodeli kashukela we-satellite imitha ye-Express nezinye izilungiso kufanele zinake imininingwane:
I-ELTA Satellite - PKG-01,
I-Satellite Plus - PKG-02,
I-Satellite Express - PKG-03.
Imivimbo yokuhlola i-ELTA Satellite
Ukuhambisana nomthetho kunquma ukuthi kungenzeka kokwenza inhlolovo ngedatha ethembekile. Qiniseka ukuthi ubheka usuku lokuphelelwa isikhathi imichilo yokuhlola.
Noma imaphi ama-4 lidets aseceleni emikhiqizo yesimanje yezokwelapha isetshenziselwa ipeni lokubhoboza.
Idivayisi yasekhaya iyathembeka futhi iyasebenza, kepha iyatholakala ngentengo enhle kakhulu. Ama-Consumum nawo azoba usizo ekuthengeni okuzayo. Izinzuzo ezikhethekile ziyabonakala uma ziqhathaniswa nabalingane abangenisile.
Izindleko zelensi ye-satellite glucometer, imichilo yokuhlola nedivaysi:
I-ELTA Satellite: ama-ruble ayi-1200, izingcezu ezingama-50 zemichilo enama-lancets zizobiza ama-ruble angama-400,
I-Satellite Plus: ama-ruble ayi-1300, izingcezu ezingama-50 zezinto ezidliwayo nazo zibiza ama-ruble angama-400,
I-Satellite Express: ama-ruble ayi-1450, imichilo yokuhlola enama-lancets (izingcezu ezingama-50) kubiza ama-ruble angama-440.
Lezi zintengo ziyabonakala, njengoba izindleko eziqondile zinqunywa yisifunda kanye nenethiwekhi yamakhemisi. Kunoma ikuphi, amanani azokwamukeleka kulabo okumele bahlole njalo ushukela wegazi labo ukuvimbela ubunzima besifo sikashukela.